ဒီဇင်ဘာလ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဒီဇင်ဘာလ 2018
နေအိမ် > ဒီဇင်ဘာလ 2018
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ Are you planning for the upcoming summer holidays and thinking of the itinerary? သင်တစ်ဦးသည်ရှာဖွေခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအတွက်သင်၏နောက်ရထားခရီး, ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားအလွယ်တကူကိုယ်ငွေကိုကယျတငျနိုငျ. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျရထားထိုင်ခုံအစောပိုင်းဘွတ်ကင်အဘို့အသွားလျှင်,…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဘယ်သူမှတကယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်သစ် fries ၏အစစ်အမှန်ပုံပြင်သိတယ်. သူတို့ပြင်သစ်ကနေလာမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုတောင်သေချာမဖွစျနိုငျ, မှာအားလုံး. စောင့်, ဘာ?! Yeap, သင်မှန်ကကြားဖူးတယ် – ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပြင်သစ်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအစားအစာအခိုင်အမာပါပြီ, and they both have stories to…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပ၌ရထားသာရှိပြီးပြည်ပမှဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် polemic တစ်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, လူတိုင်းရဲ့အပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆရတယ်. ဒါပေမဲ့, ကျနော်တို့တောင်မှဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်, ကျနော်တို့လျှင် - လုံလောက်တဲ့က? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးခယျြသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအမြဲပထမဦးဆုံးလာသင့်တယ်, and we’re addressing…